→ iPhone, iPad, Mac နှင့် PC အတွက် WhatsApp ကိုအခမဲ့ download လုပ်ပါ အိုင်ဖုန်းသတင်း
WhatsApp ကိုအခမဲ့ download လုပ်ပါ ၎င်းသည်အလွန်လွယ်ကူသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်လက်ရှိတွင်ပလက်ဖောင်းအားလုံးအတွက်အခမဲ့ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်၎င်း၏အောင်မြင်မှုအတွက်အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်ပြီးကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိသန်းပေါင်းရာနှင့်ချီသောစက်ပစ္စည်းများပေါ်တွင်ရရှိနိုင်သည့်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင့်အားမည်သို့ကူညီရမည်ကိုပေးလိုပါသည် WhatsApp ကိုအခမဲ့ထည့်သွင်းပါ အရိုးရှင်းဆုံးနည်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆက်ကပ်အပ်နှံထားသောသင်ခန်းစာများကိုကျေးဇူးတင်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်လိုအပ်သောသင်ခန်းစာကိုရှာဖွေရန်ကျွန်ုပ်တို့၏မီနူးများနှင့်ကွဲပြားသောကဏ္ofများကိုအသုံးချပြီးသင်တပ်ဆင်ခြင်းတစ်လျှောက်အဆင့်တစ်ခုတည်းကိုမလွတ်သွားစေရန်သင်လိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်အားလုံးကိုသင့်အားပေးမည်။
Mac အတွက် Whatsapp
iPhone အတွက် Whatsapp
WhatsApp တွင်အင်ဂျင်နီယာများ၏နောက်ကွယ်တွင်တရားဝင်သာမကတရားဝင်သာမကတရားဝင်အင်ဂျင်နီယာများလည်းပါ ၀ င်သည်။ ထို့ကြောင့်ပြုပြင်ထားသော WhatsApp ဗားရှင်းများပျောက်ဆုံးနေခြင်းမရှိသေးပေ။ WhatsApp ကို Plus အားWhatsApp application သည်၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့ပိုမိုရယူရန်ခွင့်ပြုပေးသည်။ ၎င်းတွင်မူရင်း application တွင်မရှိသောစိတ်ကူးကောင်းသောလုပ်ဆောင်မှုများပါဝင်သောကြောင့်သင် WhatsApp Plus အားနောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်းများကိုအလွယ်တကူ download ပြုလုပ်နိုင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ကူညီပေးမည်။ နည်းပညာစကြဝuniverseာတွင်အကျော်ကြားဆုံးစာတိုပေးပို့ရေး client ၏လူကြိုက်အများဆုံးပြုပြင်မွမ်းမံ၏။
1 မည်သည့်စက်ပစ္စည်းပေါ်တွင်မဆို WhatsApp ကိုခံစားပါ
2 WhatsApp ကို PC ပေါ်တွင် Install လုပ်ပါ
3 Whatsapp ဆိုတာဘာလဲ။
4 WhatsApp ကိုအမြဲတမ်း update လုပ်နိုင်ပါတယ်
5 WhatsApp ရဲ့စာဝှက်စနစ်
6 WhatsApp ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝကိုပြောင်းလဲစေခဲ့သည်
6.1 WhatsApp ကိုမှရွေးချယ်စရာများ
7 WhatsApp Plus နှင့်ယင်း၏မျိုးကွဲများကိုသိကျွမ်းပါ
8 အခြားနိုင်ငံများရှိ WhatsApp ကို
9 WhatsApp ကိုသင်မသိသောအရာများ
မည်သည့်စက်ပစ္စည်းပေါ်တွင်မဆို WhatsApp ကိုခံစားပါ
အမှု iPhone အတွက် WhatsApp အဲဒါဟာထူးခြားပါတယ် Apple platform သည် WhatsApp ကို messaging client အဖြစ်မွေးဖွားပေးခဲ့ပြီး ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် iOS App Store သို့ယူရို ၀.၉၉ ဒေါ်လာဖြင့်ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ၎င်းကသင့်အားဘဝအတွက် ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုကိုပေးခဲ့သည်။ WhatsApp ကိုအသစ်တဖန်လုပ်ရန်မလိုအပ်ပါ အခမဲ့, ဒါပေမယ့် WhatsApp ကိုအမြဲပထမ ဦး ဆုံးဝယ်ယူပြီးနောက်အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းတွင် WhatsApp သည် ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင်အခမဲ့ဖြစ်ခဲ့သည်။ သို့သော်နှစ်စဉ်ကြေးပေးသွင်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်လာပြီးတစ်နှစ်ဝန်ဆောင်မှုအတွက်ယူရို ၀.၉၉ ကျသင့်သည်။ Facebook ဝယ်ယူမှုလုံးဝပျောက်ကွယ်သွားပြီးသည့်နောက်၊ WhatsApp ကိုအခမဲ့ဒေါင်းလုပ်ချခြင်းသည်လုံးဝဖြစ်နိုင်ပြီးထာဝရဖြစ်သည်။
WhatsApp ကို Messenger ကိုအခမဲ့
WhatsApp ကို Blackberry မှာဖြန့်ချိခဲ့ပုံရတယ် ဒါ့အပြင်ဒီနေ့ကုမ္ပဏီရဲ့ပျောက်ဆုံးမှုကြောင့်ဒီစနစ်ဟာရပ်စဲသွားပြီဆိုပေမယ့် WhatsApp ဟာဒီလည်ပတ်မှုစနစ်မှာအပြည့်အဝလည်ပတ်နိုင်ပြီးအခမဲ့ဖြစ်သည်။ ဤကိစ္စတွင် BBPin သည်ပြိုင်ဘက်များဖြစ်သော်လည်း WhatsApp သည်စနစ်ကိုအလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးအသုံးပြုသူအများစုသည်စျေးကွက်ရှိလူကြိုက်အများဆုံးလက်ငင်းစာတိုပေးပို့ရေးသုံးစွဲသူကိုရွေးချယ်ရန်ပိုမိုနှစ်သက်ကြသော်လည်း၎င်းတို့ကိုကျွန်ုပ်တို့အပြစ်မတင်ပါ။ BlackBerry သည်၎င်းအတွက်တိကျစွာဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး၎င်း၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကီးဘုတ်များသည်စာရိုက်ခြင်းမြန်နှုန်းနှင့်အခြားစက်ပစ္စည်းများမရောက်ရှိနိုင်အောင်လွယ်ကူစွာပံ့ပိုးပေးသည်။
ဒါဟာဖြစ်စေပျောက်ဆုံးမရနိုင်ပါ Android မှာ WhatsApp ကို၎င်းသည်ဈေးကွက်၏အဓိကလည်ပတ်မှုစနစ်ဖြစ်ပြီးကမ္ဘာအ ၀ ှမ်းရှိမိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များ၏ ၇၀% ခန့်ကိုထိန်းချုပ်သည်။ ထို့ကြောင့် WhatsApp သည် Android တွင်မည်သည့် operating system ထက်မဆိုပိုမိုအားကောင်းသည်။ ဒီပလက်ဖောင်းအရာအတွက်ပထမ ဦး ဆုံးဖြစ်ခဲ့သည် WhatsApp ကိုအခမဲ့ download လုပ်ပါ ထို့အပြင်လျှောက်လွှာ၏ကြေးပေးသွင်းမှုကို Android တွင်အလွန်ငြီးငွေ့ဖွယ်ရာအဖြစ်အပျက်များပြန်လည်သက်တမ်းတိုးရန်လည်းဖြစ်နိုင်သည်။ နေ့ရက်များကုန်လွန်လာသည်နှင့်အမျှဆက်သွယ်မှုကိုပြန်လည်အသက်သွင်းပြီးတစ်နှစ်သက်တမ်းတိုးခြင်းကိုဘယ်နေရာမှမဖြစ်ခဲ့ပါ။ Android အတွက် WhatsApp ကို download လုပ်ပါ ၎င်းသည် Google Play Store သို့သွားပြီးဒေါင်းလုပ်လုပ်ထားသောအပလီကေးရှင်းများအကြားရှာဖွေသကဲ့သို့လွယ်ကူသည်၊ အမြဲတမ်းပထမနေရာတွင်ရှိနေလိမ့်မည်။
စမတ်တက်ဘလက်တွေလည်းအတူတူပဲ၊ တက်ဘလက်အတွက် WhatsApp ကို download လုပ်ပါ ၎င်းသည်လုံးဝဖြစ်နိုင်ပြီး၊ အထူးသဖြင့် Android ဖုန်းလည်ပတ်မှုစနစ်ကိုလည်ပတ်သည့်အခါကျွန်ုပ်တို့တွင်အခြားနည်းလမ်းများစွာတွေ့ရသည်။ ၎င်းကိုသင်တက်ဘလက်တွင် SIM ကဒ်တစ်ခုဖြင့်တပ်ဆင်နိုင်သည်သို့မဟုတ်အခြားမိုဘိုင်းဖုန်းမှမည်သည့်အခြား SIM ကဒ်ကိုမဆိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ ထို့အပြင် WhatsApp ဝက်ဘ်ဆိုက်၏ဗားရှင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ကြိုက်နှစ်သက်သောဘရောင်ဇာတွင် desktop mode ကို သုံး၍ တက်ဘလက်များတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်တက်ဘလက်တွင် WhatsApp မူကွဲရှိလိမ့်မည်။ သိပ်အားထုတ်မှုမပါဘဲ။
သို့သော်၊ တက်ဘလက်များတွင်လူကြိုက်အများဆုံးမှာ iPad ဖြစ်သည်။ ဒီကိစ္စမှာ, WhatsApp ကို install လုပ်ပါ မူလ application တစ်ခုအနေနှင့်၎င်းသည်အလွန်ခက်ခဲပြီး၎င်းကို Jailbreak ကဲ့သို့သောကိရိယာဖြင့်သာဆောင်ရွက်နိုင်သည်။ သို့သော် Android tablet များကဲ့သို့ပင် WhatsApp ဝက်ဘ်ဝန်ဆောင်မှုကိုမည်သည့်နေရာမှမဆိုအလွယ်တကူအသုံးပြုနိုင်သည်။ iPad ပေါ်မှာ browser ကိုသုံးလို့ရတယ် iPad ပေါ်ရှိ WhatsApp ကိုအခမဲ့ရယူလိုက်ပါ ကြိုးစားအားထုတ်မှုများများစားစားမရှိပဲ Safari browser ကိုယ်တိုင်မှ WhatsApp Web service ကိုသာ ၀ င်ရောက်ပြီး desktop version mode ကိုသာရွေးချယ်ရပါမယ်။
WhatsApp ကို PC ပေါ်တွင် Install လုပ်ပါ
၂၀၁၆ ခုနှစ်မေလမှာ WhatsApp ဟာဗားရှင်းတစ်ခုကိုစတင်ရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီဆိုတဲ့သတင်းကိုရရှိခဲ့တယ် Mac အတွက် WhatsAppထို့ကြောင့် WhatsApp application ကိုကျွန်ုပ်တို့၏ Mac သို့လျင်မြန်စွာ download လုပ်နိုင်ပြီး၎င်းသည် MacBook ကဲ့သို့လက်ပ်တော့ပ်တစ်ခုဖြစ်သည့်၊ အရေးကြီးသည့် iMac ကဲ့သို့သောကွန်ပျူတာဖြစ်စေ၊ ကီးဘုတ်နှင့်ကီးဘုတ်၏သက်တောင့်သက်သာရှိမှုနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အဆက်အသွယ်များအားလုံးနှင့်ချက်တင်စကားပြောနိုင်သည်။ အရာတစ်ခုကတော့ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့သူငယ်ချင်းများနှင့်ချစ်မြတ်နိုးရသူများနှင့်ဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည် Mac အတွက် WhatsApp.
ဒါပေမယ့်ဒီနေရာမှာအရာရာတိုင်းရှိနေတာမဟုတ်ပါဘူး PC အတွက် Whatsapp တစ်ချိန်တည်းမှာရောက်ရှိခဲ့သည်။ Windows 8, Windows 8.1 (သို့) Windows 10 ရှိသည့်မည်သည့်ကွန်ပျူတာမဆို PC အတွက် WhatsApp ကိုဒေါင်းလုတ်ဆွဲ။ အခြားမည်သည့် application နှင့်မဆိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ တစ်ခုတည်းသောဆိုးကျိုးတစ်ခုမှာ၎င်းသည်သီးခြား application မဟုတ်ဘဲရိုးရှင်းသော WhatsApp Web client ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်သည် WhatsApp နှင့် iPhone အတွက် WhatsApp ဗားရှင်းကဲ့သို့သောကျွန်ုပ်တို့၏အဆက်အသွယ်အားလုံးနှင့်စကားပြောနိုင်ရုံသာမကစာရွက်စာတမ်းများကိုကျွန်ုပ်တို့၏အဆက်အသွယ်များထံပေးပို့နိုင်သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ရှိသောဓာတ်ပုံများဝေမျှနိုင်သည်။
WhatsApp သည်မကြာသေးမီအချိန်ကလူကြိုက်အများဆုံးလက်ငင်းစာတိုပေးပို့ရေး application ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကမ္ဘာအနှံ့ရှိစမတ်ဖုန်းအများစုတွင်အသုံးများဆုံးသော application တစ်ခုဖြစ်ရုံသာမက၎င်းသည်လည်းဖြစ်သည် ငါတို့လူတိုင်းနှင့်ပြောဆိုဆက်ဆံပုံပြောင်းလဲသွားသည်, ဤလျှောက်လွှာသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အဆက်အသွယ်များသို့မက်ဆေ့ခ်ျများပို့ခြင်းဖြစ်နိုင်ချေကိုအစွန်းရောက်စေရန်လွယ်ကူစေသည်။ တကယ်တော့ငါတို့ချစ်ရသူတွေနဲ့ဆက်သွယ်ပြောဆိုပုံပြောင်းလဲသွားတယ်၊ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှပြောင်းလဲလာတယ်၊ ဒါပေမယ့်အနှစ်သာရကအတူတူပဲ၊ မက်ဆေ့ခ်ျတွေကိုမြန်မြန်ပို့ပေးတယ်။
3G နည်းပညာတိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှအပလီကေးရှင်းများပွားများလာသည်နှင့်အမျှလူအားလုံး၏ငွေတောင်းခံမှုများတွင်သိသိသာသာစုဆောင်းမှုရှိသည်ဟုထင်မြင်ခဲ့သည်။အသုံးပြုရန်လွယ်ကူမြန်ဆန်ပါသည် WhatsApp ကိုကြိုက်တယ်။ ထို့ကြောင့်သူတို့သည်လျင်မြန်စွာအပေါက်တစ်ခုကိုထွင်း။ BlackBerry ပင်နံပါတ်ကိုအစားထိုးခဲ့သည်။ ၎င်းသည် chat တစ်ခုတည်းရှိအဆက်အသွယ်အုပ်စုများအပြင်ဓာတ်ပုံများပို့ခြင်း၊ WhatsApp ကို ၀ င်ငွေအားလုံးတွင်ထိပ်ဆုံးသို့မြှင့်တင်ခြင်းခွင့်ပြုပြီးမကြာမီအချိန်အတိအကျအတိအကျမသိရသေး။ အကန့်အသတ်မရှိသောမက်ဆေ့ခ်ျများပေးပို့နိုင်သည်။ စာရင်းနှင့်အောင်မြင်မှုများ, ဘာပဲပလက်ဖောင်း။
ဒီ application ဟာ iOS App Store မှာ ၂၀၁၀ ဇန်နဝါရီလမှာပထမဆုံးရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးလက်ရှိအခြေအနေကတော့ ၆ နှစ်ကျော်သွားပါပြီ။ သို့သော်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ Android, BlackBerry, Windows Phone, Symbian နှင့် S2010 Series များအတွက်လိုက်လျောညီထွေမှုရှိလာသည်။ WhatsApp သည်ဆက်လက်မြင့်မားနေဆဲဖြစ်သော်လည်းဤ operating systems အတော်များများပျောက်ကွယ်သွားသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်း၏အောင်မြင်မှုကိုသံသယမဝင်နိုင်ပါ။ WhatsApp သည်သတင်းပို့ခြင်းလောကကိုပြောင်းလဲစေခဲ့သည် ငါတို့သိသကဲ့သို့
လျှောက်လွှာ၏အမည်မှာအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်ဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည် "ဘာတွေထူးလဲ?", ဆယ်ကျော်သက်များအကြားဖက်ရှင်အတွက်နွေးထွေးစွာနှုတ်ခွန်းဆက်စကား။ အရာအားလုံးနှင့်အတူ, အမြဲတမ်းနှစ်ပေါင်းများစွာဆက်လက်တည်ရှိသည်အရာသည်၎င်း၏အမှတ်တံဆိပ်အစိမ်းရောင်တံဆိပ်ဖြစ်ပြီး၊ အတွင်းဘက်တွင်တယ်လီဖုန်းပါ ၀ င်သည်။ ရိုးရှင်းသော်လည်းတိုက်ရိုက်၊ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအသိအမှတ်ပြုသင်္ကေတတစ်ခုဖြစ်သည်။ အခြားအမှတ်တံဆိပ်၏အခြားတံဆိပ်များလည်းဖြစ်နိုင်သည်။ ငါတို့ကိုစာဖတ်နေတဲ့မင်းကဲ့သို့သောကမ္ဘာတဝှမ်းရှိသန်းပေါင်းရာနှင့်ချီသောလူများ၏နေ့စဉ်ဘဝအကြောင်းကို။ ဒါကြောင့်ဒီစာမျက်နှာကိုသင်လာတာပါ၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါတို့ကဒီစိတ်ကူးကောင်းတဲ့ application အကြောင်းအရာအားလုံးကိုသင်ချင်တယ်၊ ဒါ့ကြောင့်သင်ကအဲ့ဒီ့ထဲကအကောင်းဆုံးကိုရချင်တယ်၊ မင်းနဲ့စကားပြောရတာပျော်ဖို့ကောင်းတယ်။ ဝေဒနာခံစားနေရသူတွေရှိတယ်ဆိုတာခင်ဗျားသိလား WhatsApp စွဲ?
WhatsApp ကိုအမြဲတမ်း update လုပ်နိုင်ပါတယ်
WhatsApp ကိုအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းသည်ရိုးရှင်းပါသည်။ သင်၏ပလက်ဖောင်းမည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ သင်ဟာ iOS App Store သို့သွားပြီးအချိန်ကောင်းဟုတ်မဟုတ်သိရန်နောက်ဆုံးသတင်းများကိုကြည့်ပါ။ WhatsApp ကို update။ iOS အတွက် WhatsApp အတွက်ပိုမိုနှစ်သက်သော update များအနက်တစ်ခုမှာ "bug fixes" ဟုခေါ်သည်။ ၎င်းသည် application ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်စေသော်လည်းမကြာမီပေါ်ထွက်လာမည့်သတင်းများစွာကိုဖုံးကွယ်ထားသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ Android ၏လုပ်ဆောင်မှုသည်အတူတူပင်ဖြစ်သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် Google Play စတိုးသို့သွားရမည်။ ကျွန်ုပ်တို့ ၀ င်ရောက်သည်နှင့်တပြိုင်နက် update ကိုလိုအပ်သော application များအကြောင်းကျွန်ုပ်တို့အားအသိပေးလိမ့်မည်။
အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှလုံခြုံရေးလိုအပ်ချက်များမြင့်တက်လာခြင်းကြောင့် WhatsApp သည် ၂၀၁၆ အစတွင် message encryption system တစ်ခုထည့်သွင်းရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ဖြစ်နိုင်ရင်ပေးပို့လိုက်တဲ့ခေါ်ဆိုမှုတွေနဲ့စာတိုတွေဟာအဆုံးမှအဆုံးသို့စာဝှက်တယ်၊ ဆိုလိုတာက WhatsApp နဲ့တတိယပါတီများကနားမထောင်နိုင်ဘူး။ ကျွန်ုပ်တို့အကြောင်းကြားရန်အသုံးပြုသူအသစ်နှင့်စကားစပြောတိုင်းလုံခြုံရေးသတိပေးချက်လေးတစ်ခုပေါ်လာလိမ့်မည် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်သွယ်ရေးအားလုံးလုံခြုံပြီးစာဝှက်ထားတယ်, WhatsApp သည်လုံခြုံရေးနှင့်သီးသန့်တည်ရှိမှုကိုအကြီးအကျယ်လောင်းထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့မထီမဲ့မြင်မပြုနိုင်သောအရာမဟုတ်ပါ၊ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့၏အချက်အလက်များကိုလုံခြုံစွာထားရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။
နောက်ဆုံးလေ့လာမှုများအရ စပိန်နိုင်ငံသား ၅၃ ရာခိုင်နှုန်းဟာ WhatsApp ကိုတစ်နေ့ ၅ ကြိမ်ကနေ ၅၀ ကြားမှာရှိကြတယ်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုအံ့အားသင့်စေသည့်အရာမဟုတ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့အများစုသည်ဤလျှောက်လွှာကိုကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကဆက်သွယ်ရေးနည်းလမ်းအဖြစ်အသုံးပြုကြသည်၊ ကမ္ဘာအနှံ့ရှိသုံးစွဲသူအမြောက်အများက၎င်းကိုယုံကြည်မှုရှိစေသည်။ ဤအတောအတွင်း WhatsApp သုံးစွဲသူများ၏ ၉၀% သည်တက်ကြွသောအသုံးပြုသူများဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာသူတို့သည် ၀ န်ဆောင်မှုကိုတစ်နေ့လျှင်တစ်ကြိမ်ထက်ပိုပြီးအသုံးပြုကြပြီး၎င်းသည်အမှန်တကယ်ဆက်သွယ်ရေးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ အသုံးပြုသူ ၉၈.၁ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့်အများဆုံးအသုံးပြုသောလက်ငင်းစာတိုပေးပို့စနစ် application ဖြစ်သော Telegram, Skype သို့မဟုတ် Facebook Messenger တို့ထက်သာလွန်သည်။
ဖေဖော်ဝါရီလ 2016 ခုနှစ်တွင် WhatsApp သည်သုံးစွဲသူတစ်ဘီလီယံ၏အတားအဆီးကိုချိုးဖျက်ခဲ့သည်ဥပမာ - Messenger ဝန်ဆောင်မှုသည် Facebook Messenger သုံးစွဲသူသန်း ၂၀၀ ထက်ကျော်လွန်နေသည်။ နောက်ဆုံးစာရင်းဇယားများအရ WhatsApp ဆာဗာများသည်တစ်နေ့လျှင်စာစောင်ပေါင်း ၄၂၀၀၀ သန်းနှင့်ဗီဒီယိုသန်း ၂၅၀ ကျော်ကိုကိုင်တွယ်နေသည်။ ၎င်းသည်စာတိုပေးပို့ရေးဖောက်သည်၏လူကြိုက်များမှုနှင့် mode ပြောင်းလဲနေပုံကိုသက်သေထူသည့်ဆက်သွယ်မှုဖြစ်သည်။ , ချစ်ရသူနှင့်ငါတို့ပတ်လည်ရှိသတ္တဝါအပေါင်းတို့။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေကမ္ဘာအနှံ့တွင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးများဆုံးဖြစ်သော်လည်း၎င်းတို့ကိုကြိုက်နှစ်သက်သည့်တရုတ်ကဲ့သို့သောစျေးကွက်များကယင်းကိုခုခံတွန်းလှန်ကြသည် WeChatKakao Talk စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများချမှတ်ထားသောတောင်ကိုရီးယားသို့မဟုတ်ဂျပန်၊ လိုင်း ၎င်း၏ကြီးစိုးအနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆက်လက်။ WhatsApp Web ကိုစတင်သုံးစွဲခြင်းနှင့်ဘဝအတွက်အခမဲ့ဖြစ်လာပြီးအချက်အလက်များနှင့်အတူပိုမိုပူးပေါင်းလာကြသည်။
WhatsApp Plus နှင့်ယင်း၏မျိုးကွဲများကိုသိကျွမ်းပါ
iOS အတွက် (သင့်မှာ jailbreak မရှိလျှင်) များစွာသောသူတို့ရှိသည် WhatsApp Plus အားပြုပြင်မွမ်းမံ အမျိုးမျိုးသော developer များကလုပ်ခဲ့ကြပြီ ဥပမာ, WhatsApp ကို Plus အား Holo, WhatsApp Plus ၏မူကွဲဖြစ်သည့်အသစ်မွမ်းမံသေးသောထို Android ထုတ်ကုန်များအတွက် Holo interface ကိုအသုံးပြုခွင့်ပြုသည်။ ဤ Holo ဗားရှင်းသည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကုန်ပိုင်းက Android ထုတ်ကုန်အများစုတွင်ယခင်ကဖော်ပြခဲ့သော interface ရှိခြင်းကြောင့်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကုန်ပိုင်းတွင်ရပ်ဆိုင်းခဲ့သည်။ သို့သော်အခြားရင်းမြစ်များထွက်ပေါ်လာခဲ့သည် WhatsApp ကို Plus အား Jimods, WhatsApp ကိုတစ် ဦး ပြုပြင်မွမ်းမံ၎င်း၏နောက်ဆုံးပေါ်စုစည်းမှုတ ဦး တည်းအပေါ်အခြေခံပြီး, အဲဒါကိုကျနော်တို့ကွန်ယက်ပေါ်တွင်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်အရှိဆုံးတည်ငြိမ်သောဗားရှင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဤနေရာတွင်သင်လိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်အားလုံး၊ WhatsApp ပြုပြင်မွမ်းမံမှုများ၊ မူရင်းဗားရှင်းများနှင့်ရိုးရှင်းလွယ်ကူသောသင်ခန်းစာများကိုသင်ရှာဖွေနိုင်မည်။ Free whatsapp။ WhatsApp ကဲ့သို့ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုသော application တစ်ခုနှင့်၎င်းင်း၏အကန့်အသတ်များ၊ စျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုများကိုကျွန်ုပ်တို့အပြည့်အ ၀ သိရန်အရေးကြီးသည်။ ဤဝိသေသလက္ခဏာများကိုအသုံးပြုခြင်းသည်မည်သည့်အခြေအနေများပေါ် မူတည်၍ နှစ်ဖက်တပ်ထားသည့်ဓားဖြစ်လာနိုင်သည်ကိုသတိပြုပါ။
အခြားနိုင်ငံများရှိ WhatsApp ကို
WhatsApp သည်ပထ ၀ ီနယ်နိမိတ်များကိုဖြိုခွဲခဲ့ခြင်းကိုလည်းဖော်ပြသင့်သည် ကျွန်ုပ်တိုင်းပြည်ပြင်ပရှိ WhatsApp ကိုသုံးနိုင်သည်နှင့်အဖြေကိုလုံးဝဟုတ်ကဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ WhatsApp သည်မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုအခမဲ့အသုံးပြုနိုင်သည် (သို့) 3G သို့မဟုတ် WiFi တစ်ခုခုကိုယခင်ကဖွင့်ထားပြီးအင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုရှိသည့်ကိရိယာ။ ထို့အပြင်၊ လျှောက်လွှာကို uninstall မပြုလုပ်ပါကကျွန်ုပ်တို့၏အသုံးပြုသူကိုဆုံးရှုံးမည်မဟုတ်ပါ။ ထို့ကြောင့်မည်သည့်နိုင်ငံတွင်မဆို WhatsApp ကိုအသုံးပြုရန်လွယ်ကူသည်။ ကျွန်ုပ်တို့မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုကျွန်ုပ်တို့ချစ်မြတ်နိုးရသူများနှင့်အဆက်အသွယ်ဆက်လက်ပြုလုပ်နိုင်ပြီးအင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုကိုသာလိုအပ်သည်။
နောက်ထပ်ကောင်းသောဖြစ်နိုင်ချေတစ်ခုမှာကျွန်ုပ်တို့လုပ်နိုင်သောအရာဖြစ်သည် ငါတို့ရဲ့ WhatsApp အကောင့်ကိုကဒ်ပဲသုံးပါ ငါတို့မိတ်ဆက်ကြပြီ။ ဥပမာ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် WhatsApp ကို National ကဒ်ဖြင့်သက် ၀ င်စေခဲ့သော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်နိုင်ငံရပ်ခြားသို့သွားမည်ဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့သတ်မှတ်ထားသောတိုင်းပြည်တွင်ရှိသည့်ဒေတာနှုန်းထားများကိုပေးဆောင်လိုပါကကဒ်ကိုသာဆက်လက်ထည့်သွင်းပြီးဆက်လက်ခံစားရန်လိုအပ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဆက်အသွယ်များအနေဖြင့် WhatsApp နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောကျွန်ုပ်တို့၏ယခင်နံပါတ်မှတဆင့်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်စကားဝိုင်းဆက်လုပ်နိုင်သည်၊ နိုင်ငံရပ်ခြား၌နေထိုင်သောအခါကျွန်ုပ်တို့၏သူငယ်ချင်းများနှင့်ဆက်လက်စကားပြောရန်ကောင်းသောနည်းလမ်းမှာနိုင်ငံ၏နှုန်းထားများကိုအခွင့်ကောင်းယူရန်အခြားဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုရှိထားသော်လည်း။
WhatsApp ကို ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင်မွေးဖွားခဲ့သည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှာ WhatsApp ကို Facebook ကဒေါ်လာသန်း ၁၉၀၀၀ နဲ့လဲလှယ်ခဲ့ပါတယ်။ သင်မသိခဲ့တာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ် WhatsApp ကိုဖန်တီးသူများ၏အမည်၊ Jan Koum နှင့် Brian Acton တို့သည် ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် Yahoo မှဖေ့စ်ဘွတ်ခ်နှင့်တွစ်တာတို့အား ၀ န်ဆောင်မှုပေးခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီနှစ်ခုစလုံးကငြင်းပယ်ခဲ့ကြပြီးမည်မျှနောင်တရကြသည်ကိုမသိကြပါ။ အကယ်၍ ငှားရမ်းပါကဒေါ်လာဘီလီယံနှင့်ချီ။ ကယ်တင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ သူတို့ကို။ ငှားရမ်းခြင်းမပြုလုပ်ရခြင်းသည်အလွန်အံ့သြဖွယ်အကောင်းဆုံးနည်းဖြင့်ဘီလျံနာများဖြစ်လာကြသည့်တီထွင်သူများကိုအံ့သြဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်အကျိုးပြုစေသည်။
သငျသညျမသိစေခြင်းငှါနောက်ထပ်ရှုထောင့်ကြောင်းဖြစ်ပါတယ် WhatsApp ဟာကြော်ငြာအတွက်တစ်ပြားမှမသုံးဖူးဘူးကုမ္ပဏီသည်၎င်း၏အက်ပလီကေးရှင်းကိုမြှင့်တင်ရန်ကြော်ငြာကိုမည်သည့်နေရာတွင်မျှနေရာမချခဲ့သောကြောင့်အောင်မြင်မှုသည်နှုတ်အားဖြင့်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်အော်ပရေတာများသည်ငွေအမြောက်အမြားကိုဆုံးရှုံးစေသည်။ ပထမအားဖြင့် SMS ကိုပယ်ဖျက်ခြင်းနှင့် WhatsApp မှတစ်ဆင့် VOIP ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများကိုပြုလုပ်နိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း WhatsApp တွင်ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုများပြုလုပ်နေသည်။ ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့ဆက်သွယ်ပြောဆိုသည့်အခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောအပြောင်းအလဲတစ်ခုဖြစ်သည်။ WhatsApp သည်သူတို့ထိသမျှကိုပြောင်းလဲပေးသည်။ ၎င်းသည်ဒေါ်လာဘီလီယံနှင့်ချီသောသုံးစွဲသူများသည်ကျွန်ုပ်သွားလေရာနေရာတွင်လိုက်နာလိမ့်မည်။
သင်ရှာဖွေနေတဲ့အရာမှန်သမျှကိုသင်ရှာမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ် ကဗျာ ဤတွင်ကျွန်ုပ်တို့တွင်စျေးကွက်ရှိအကောင်းဆုံးလက်ငင်းစာတိုပေးပို့ရေး application နှင့်သက်ဆိုင်သောသင်လိုအပ်သည့်အရာအားလုံးရှိသည်။ မင်းလိုချင်တယ်ဆိုရင် whatsapp အခမဲ့ download လုပ်ပါဒီမှာသင်လိုအပ်သမျှကိုတွေ့လိမ့်မယ်။